Umthetho weNgqesho | Law & More BV
Umthetho wengqesho yindawo eyandisiweyo yomthetho. Amalungelo kunye nezibophelelo zilawulwa kwiikhontrakthi zengqesho, imigaqo yengqesho, izivumelwano ezidibeneyo, umthetho kunye nomthetho. Amagqwetha engqesho Law & More bafanelekile kwaye banolwazi ngomthetho wangoku kunye nolawulo.
> Ingcebiso kwezomthetho
> Iluncedo, yanele kwaye ibekekile
Imicimbi yezomthetho wengqesho ihlala ineziphumo ezifika kude kubaqeshi nakubasebenzi. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba uncediswe ligqwetha lezomthetho elikhethekileyo namava. Emva kwayo yonke loo nto, iingcebiso zomthetho ezifanelekileyo malunga nomthetho wengqesho kwangaphambili zinokuthatha isigqibo ngekamva. Ngelishwa, ukungqubana akunakusoloko kuthintelwa, umzekelo kwimeko yokugxothwa, ukuhlelwa ngokutsha okanye ukungabikho ngenxa yokugula. Olu hlobo lweemeko alungemnandanga kwaye lunemvakalelo kwaye lunokulonakalisa ubudlelwane phakathi komqeshi nomsebenzi. Ukuba ukhathazwa yingxabano yengqesho, Law & More uya kukuvuyela ukukunceda ukuba uthathe amanyathelo afanelekileyo.
Law & More libonelela ngoncedo kumashishini, kubaphathi bemithetho, kubaqeshi nakwabasebenzi kwicandelo lomthetho wengqesho. Iqela lethu linika iingcebiso kwezomthetho kwaye ziya kubambezeleka ukuba kunyanzelekile.
Ukuyilwa kuvavanywa izivumelwano zengqesho zabucala nezamaqela;
Ukupheliswa kwezivumelwano zengqesho zabaqeshi nabasebenzi;
Uncedo kwiimbambano zomsebenzi
Ukuseta ifayile yabasebenzi
Imiba emalunga nemirholo yemivuzo
Imiba emalunga nezivumelwano ezidityanelweyo
• iholide kunye nekhefu
• ukugula kunye nokuvela ngokutsha
Uxanduva lwabasebenzi nabaqeshi.
Njengomqeshi, ujongene nemicimbi yezomthetho yengqesho mihla le. Kuya kufuneka wenze izivumelwano zomsebenzi, ujongane nabasebenzi abangasebenziyo okanye abagulayo kunye neengxabano zabasebenzi okanye inkampani yakho inokuphinda ihlelwe ngokutsha ngenxa yokutshintsha kweemeko zentengiso. Ngaba uyazi ngqo ukuba amalungelo akho kunye nezibophelelo zakho ziphi? Nantoni na onokuthi udibane nayo, siya kukuvuyela ukukunceda. Emva kwayo yonke loo nto, umgaqo-nkqubo olungileyo wabasebenzi ubalulekile kwinkampani esempilweni.
Njengomsebenzi, kuya kufuneka uthobele umthetho wezabasebenzi, oceliweyo kwaye ungafakwanga. Cinga ngokwamkela kunye nokusayina ikhontrakthi yengqesho, igatya elingena-khuphiswano kunye namalungelo kunye nezibophelelo zakho kwimeko yokugula kunye nokugxothwa. Siya kukuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na into yomthetho yengqesho ofuna uncedo ngayo.
Iluncedo, yanele kwaye ibekekile
Ngaphandle kwengcebiso yeengcali, ungathanda ukufumana ingcebiso kwezomthetho ngokukhawuleza. Siyayazi le nto kwaye siqhele ukusebenza ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Siyaqinisekisa ukuba kulula ukufikelela kuyo kwaye sinokukubonelela ngokukhawuleza ngeengcebiso ezisebenzayo kunye neengcali. Ungathembela kuthi kwiingcebiso ezichanekileyo nezicacileyo.
Indlela esisebenza ngayo icacile kwaye ijolise kwizisombululo. Singena kwincoko kunye nawe ukuxoxa ngetyala lakho, iminqweno yakho, amathuba asemthethweni kunye nomfanekiso wezemali. Siya kuthi emva koko sithathe isicwangciso esiliqili sokubonisana nawe. Nyathelo ngalinye lixoxwa kunye nawe, ukuze ungaze ujongane nazo naziphi na izinto ezimangalisayo.